China Economic Ultrasonic Tube Filler Uye Sealer HX-002 fekitari uye bhizimisi | HX Muchina
Zvehupfumi Ultrasonic Tube Kuzadza Uye Sealer HX-002
Kuzadza Range A: 6-60ml B: 10-120ml C: 25-250ml D: 50-500ml
Kukwanisa 6-12pcs / min
Dzvinyiriro Yemhepo 0.5-0.6MPa
Divi L860 * W670 * 1570mm
Net Kurema 180kgs
* Compact dhizaini, nekuzadza nekuisa chisimbiso basa zvese mune imwechete, inokodzera vatangi vekutangisa, bvunzo yemusika, kana sampuro yekuongorora ye laboratori.
* Nemaoko dyisa iyo chubhu, tinya bhatani rekutanga, muchina unogona kuona otomatiki chiratidzo, uchizadza, uchiisa chisimbiso nekodhi, kupera kugera.
* Inotora ultrasonic yekuisa chisimba tekinoroji, hapana chikonzero chekudziya-kumusoro nguva, yakadzikama uye yakashongedzwa chisimbiso, hapana kukanganisa uye yakaderera kuramba chiyero chiri pasi pe1%.
* Yazvimiririra R & D yedhijitari ultrasonic otomatiki yekutevera yemagetsi kudzora bhokisi, hapana chikonzero chemanyore chinogadzirisa iyo frequency, iine simba auto muripo basa, kudzivirira kudzikiswa kwesimba mushure menguva refu yekushandisa. Inogona zvakasununguka kugadzirisa simba rakavakirwa pombi yezvinhu uye saizi, kugadzikana uye kushoma chiyero chemhosva, kuwedzera hupenyu hwehupenyu kupfuura hwakajairwa bhokisi remagetsi.
* PLC ine yekubata skrini yekudzivirira system, ichipa hushamwari hwekuita chiitiko.
* Chiito chega chega chinogona kudzorwa zvakazvimiririra mukubata skrini, zvine hushamwari hwekugadzirisa pakati pemahubhu akasiyana Vashandi vaigona kushandisa chubhu imwechete kungoisa zvimiro zvese, vachichengetedza nguva yakawanda uye zvinhu.
* Netsoka chitiviri kushandira kuzadza basa wega.
* "Panasonic" yepamusoro inonzwa sensor ine mota yekutsika, yaigona kuteedzera kunyoresa chaiko.
* Yakashongedzerwa nekuzadza kune ese emvura nekirimu, nekuzadza kushivirira mukati me ± 1%. Kuzadza vhoriyamu inogadziriswa nemubati vhiri.
1. Double jekete hopper nekupisa uye inomutsa basa
Pashure: Rotary Rudzi Kuzadza uye Capping Machine HX-006FC
Zvadaro: Semi-auto Ultrasonic Tube Yakazadza Uye Sealer HX-006